ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးကို ဘယ်သူတွေရသင့်တယ်လို့ထင်လဲ? A.ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံက ကလေးတွေပဲရသင့်တယ် B.စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသက ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးတွေ C.အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မည်သူမဆို D.ဆင်းရဲစွာ နေနေရတဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးတွေ
ကလေးသူငယ်တွေ ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရွေးပေးပါ A.ဘယ်တော့အခါမှ နေမကောင်း မဖြစ်ခြင်း B.ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိခြင်း C.ထာဝရ အသက်ရှင်သန်ခြင်း
ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သင့်အနေနဲ့ A.ကိုယ့်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို မေ့လိုက်ရမယ် B.အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်နေရမယ် C.လူတိုင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်နေရမယ် D.တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လေးစားစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံရမယ်
4379 responded out of 4468 polled
ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြောပြနိုင်ပါသလဲ? A.မိသားစု အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါ B.ကျောင်းမှာ ကစားကွင်းဆောက်တဲ့အခါ C.မမျှမတ ဆက်ဆံခံရတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အခါ D.လူကြီးတွေ နိုင်ငံ့အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါ E.အထက်ဖေါ်ပြပါအားလုံး
4319 responded out of 4380 polled
ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ? A.ကလေးတွေကိုယ်တိုင် B.အသက်ပိုကြီးတဲ့ ကလေးတွေ C.အစိုးရ D.ဆရာ/ဆရာမတွေ
4195 responded out of 4320 polled
သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများအကြောင်း ဘယ်မှာ သင်ကြားဖူးပါသလဲ? A.အိမ်နှင့် စာသင်ကျောင်းမှာ B.အိမ်မှာ C.စာသင်ကျောင်းမှာ D.မသင်ကြားဖူးပါ
3661 responded out of 4319 polled